Abavelisi beMveliso-abaThengisi beMveliso baseTshayina, iFektri
Isokisi yokulawula ukutshaja sisokethi esifanelekileyo kunye nexesha elinokulungelelaniswa, ukuboniswa kunye nokulawulwa kokutshintsha. Ingawugqibezela umda weparameter yombane njengevolthi, yangoku, into esebenzayo yamandla, frequency, njl., Umlinganiselo wamandla, umboniso wedatha, ulawulo lwezinto, njl. Njl. amashishini kunye namaziko.
Isigaba sesithathu se-wire-wire / sigaba sesithathu semitha ye-enethiwekhi yindawo yesekethe enkulu edityanisiweyo, kusetyenziswa itekhnoloji yokuvavanya isampulu yedijithali kunye nenkqubo ye-SMT, eyilelwe kwaye yenziwa ngokokusetyenziswa kombane okwenyani ngabasebenzisi bemizi-mveliso. Ihlangabezana neemfuno ze-GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 kunye DL / T645-2007 .Izi mfuno zinokuguqulwa ngokweemfuno zomsebenzi
Isigaba esinye semitha yamandla ombane esisebenza ngezinto ezininzi yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe kwaye iveliswe yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yokusebenzisa amanzi ngobuchule isebenzisa isilumko se-valiyitha esilawula itafile yesiseko .Embeke kwi-MCU yebhokisi yesixhobo se-optoelectronic, imodyuli yonxibelelwano kunye nokulawula isiphaluka kwibhokisi yokulwa. iphuhlisiwe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ngokwemigaqo yobuchwepheshe ye-GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.
Indawo yokuhlola amandla ombane yokusetyenziswa kombane isetyenziselwa ukusetyenziswa kwamandla kwinqanaba lesithathu, kwaye inokuxhotyiswa ngomsebenzi wokunxibelelana nge-RS485 kunye nomsebenzi wokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, olulungele abasebenzisi ukwenza amandla, ukuqokelela nolawulo lokujonga kude. Imveliso inezibonelelo zokuchaneka okuphezulu, ubungakanani obuncinci, kunye nokufakwa ngokulula. Inokufakwa ngokulula kwaye isasazwe kwibhokisi yokuhambisa ukuze kufezekiswe umlinganiselo wamandla afakiweyo, amanani kunye nohlalutyo lweendawo ezahlukeneyo kunye nemithwalo eyahlukeneyo.
Indawo yokuhlola amandla ombane yokusetyenziswa kwezinto (iitshaneli ezi-4) yimveliso entsha yokulinganisa umbane ephuhliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu. Le mveliso isebenzisa izijikelezi ezinkulu ezihlanganisiweyo kunye neenkqubo zokuveliswa kweSMT, nemisebenzi enjengomlinganiso wamandla ombane, ukulungiswa kwedatha, ukujonga okwenyani kunye nokusebenzisana ngolwazi.
Isigaba esithathu se-LCD singeniswe edijithali sibonisa imisebenzi eyimitha yamandla e-elektroniki nge-rs485
Isixhobo esinezinto ezininzi ezisebenza ngaphakathi kwisigaba esithathu, uhlobo lwesixhobo sombane esinobuqili kunye nomgangatho wokuhlelwa, isibonisi, unxibelelwano lwe-RS485 yedijithali kunye nokuphuma kwamandla ombane, onako ukulinganisa ivolthi, amandla akhoyo ngoku, amandla asebenzayo, amandla ombane, imvamisa, umlinganiselo wamandla , ukuboniswa kwedatha, ukuqokelelwa nokudluliselwa, kungasetyenziswa ngokubanzi ekufakweni kwe-automation, ukuhambisa i-automation, izakhiwo ezinengqiqo, kunye nomlinganiselo wamandla, ulawulo, kunye novavanyo ngaphakathi kwishishini. Ukuchaneka komgangatho kwinqanaba 1, ukuqonda i-LCD okanye ukuboniswa kwe-LED kwisayithi kunye nonxibelelwano olukude lwe-RS485. Iyahambelana ne-protocol ye-DL / T645-2007 kunye ne-protocol yonxibelelwano ye-MODBUS-RTU.
Oku kwamkela iqokobhe elivutha amalangatye, elikhaphukhaphu ngobukhulu kwaye kulula ukuyifaka; iqokelela isibonisi samandla exesha lokwenene kwimitha nganye yamandla, isibonisi samandla esineyure yokubonisa iqondo lamazantsi, kunye nokufundwa kwemitha mihla le-zero-point coco amandla ombane; Ukusetwa kwendawo kunye nokufundwa kwenkqubo yemitha yokufunda.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (ikhadi le-IC)
Isigaba sesithathu secingo semitha yombane ohlawulelwayo (ikhadi le-IC) yimveliso yokulinganisa amandla amatsha eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008 kunye ne-GB / T17215.323-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.